एउटा मोटरसाईकललाई जोगाउन खोज्दा अर्कोमाथि पल्टियो बस, घटनास्थलमै ३ जनाको मृत्यु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एउटा मोटरसाईकललाई जोगाउन खोज्दा अर्कोमाथि पल्टियो बस, घटनास्थलमै ३ जनाको मृत्यु
डिसी नेपाल , २९ फाल्गुन २०७५
राजविराज । सप्तरीमा मोटरसाइकलमाथि को१ख ४९६४ यात्रुबाहक बस पल्टिँदा ३ जनाको ज्यान गएको छ।
उक्द दुर्घटनामा परी मोटरसाइकलमा सवार मो मजलुम मियाँ र रामे पासवान र एक नाम नखुलेका व्यक्तिको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। को३४प ६४३५ नम्बरको मोटरसाइकललाई जोगाउन खोज्दा उक्त बस अर्को मोटरसाईकल माथि पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उक्त बसका सवार केही यात्रुहरु घाईते भएको र उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ।
घटनाबारे पूर्ण विवरण आउँन बाँकी छ।